Nzira yekutsvakurudza uye yakashandisa sei Amazon keywords?
Ndinoda kutanga zvinyorwa zvangu uye zvidzidzo kuAmerica nekugadzirisa nekutengesa nhamba yekuverenga sezvinofunga kuti nhamba dzinokonzera kusava nechokwadi kwevaya vanoramba vachizeza kana zvakakosha kugadzirisa bhizinesi ravo pane iyi yekutengeserana kana kwete.
Maererano nemakambani ekupedzisira emabhizimisi, Amazon ndiyo inotungamirira e-retail platform muUnited States ine pedo 136 mabhiriyoni emadhora muna 2016 mutengo wekutengesa. Sezvo wenhare yegore re2016, vatengesi vekutsvaga vakaudza vanopfuura mamiriyoni 310 mamiriyoni evhidhiyo makambani pasi rose. Amazon inonzi inonzi brand inonyanya kukosha pasi rose uye muvambi wayo Jeff Bezos ndiye munhu akapfuma kwazvo munyika yose ane hupfumi hwe $ 91bn.
Unoziva zvinorevei? Zvinoreva kuti vatengesi vose vanotengesa michina yavo muAmazon vane mukana wekubudirira. Ukuru hwechikamu chako kunobva pakuwana kuwanikwa nekushandura vatsva vanokuwana iwe kune vatengi vako - $1.00 minimum deposit casinos. Yakakodzera Amazon kugadzirisa uye keywords kutsvakurudza kunogona kugadzirisa zvose zvezvinetso izvi. Kana Amazon yako ine zvinyorwa zvese zvinodiwa uye yakakwirira-kutsvaga mazwi ekutsvaga, unowana nhamba yakakwirira yevashandi yekuwana nekutenga. Kana kuverenga kwako kusina kukodzera uye kwakakosha mazwi makuru kana kuti kushandiswa kusati kwarongeka, iwe unongorasikirwa nemari yako uye vatengi vanogona.
Ndicho chikonzero nei munyaya ino tichakurukura kuti tingagadzira sei nyanzvi dzemashoko ekutsvakurudza ma Amazon bots, uye panguva imwechete inovatanidza navo mukopi yekutengesa kuitira kuti ionekwe zvakanaka uye yakajeka kune vashandisi vepakati.
Nzira ipi inoshandiswa kushandisa Amazon mazwi?
Kana zvishandiso zvako zvaita zvakanaka kuAmazon, iwe unogona kunge uine mari yakawanda. Kana icho chaunotengesa chiri chepamusoro-soro, unoda kuita zvakakwana paAmazon. Zvisinei, hazvina kukwana kuita zvidhori zvezvinhu zvako uye kunyora rondedzero. Iwe unoda kushanda zvakaoma pasi pekunyora kwako kushanda kuti uite zvakanaka-kutendeuka uye kutengesa-kuumba. Uyezve, unofanirwa kuvandudza hutano hwevashandi vako nekutarisira. Sezvo mutsika inoratidza, vatengesi vanoita zvose kusiya mavatengi vavo kugutsikana, vanowana mari yakawanda muAmazon.
Saka, ngatitaurei muchidimbu nezveAmerica mazita ekutora uye nzira dzokuita kuti mabhobho nevashandi vafare.
Amazon listing ine zvikamu zvinotevera - musoro, mutengo, zvinyorwa, zvinyorwa, mifananidzo, uye zvinyorwa. Zvose izvi zvikamu zvakakosha iwe kunyanya kufunga pamusoro pekutsvaga injini.
Chinyorwa ndicho chinhu chokutanga chinogona kukwezva kana kusafarira Amazon searcher. Zvisinei, kusika zita rako, iwe unofanira kuchengeta mupfungwa kwete Amazon chete yevatsvaga asiwo Amazon bots iyo inoshandiswa mutengo zvinyorwa kuratidzira mhinduro dzakakosha pamubvunzo wevashandi.
Kugutsa zvido zvevashandisi ne bots, unoda kugadzira zvinyorwa zvakakodzera, zvinotsanangurwa uye zvinoverengeka kusanganisira mazviri zvinotsvaga kutsvaga izwi, rudzi rwechigadzirwa, ushu hwayo, ruvara, nezvimwe zvinokosha.
Amazon inopa vatengesi vekutsvaga nehuwandu hwekugadzirisa sei musoro..Iyi dzidzo inonzi "Kugadzirisa Zvinyorwa Zvitsvakurudzo uye Tsvaga," uye unogona kuzviwana pano . Chimwe
Chimwe chinhu chikuru chekuvapo kwako kwakasimba kuAmazambique ipambiso yenhanho yekutengesa. Mutengo unoshandiswa neAmerica uye unopa mukana wekukunda Bhokisi Rekushandisa. Iwe unogona kuwana "mutengo wekutengesa" uye "mutengo wako" n Seller Central, iyo ndiyo mukana wako wekuita "kunzwa" kunzwa. Zvisinei, kana chinhu chako chiri chisingabatsiri, mutengo uyu slash unogona kunge usina kutenderwa. Chero chipi zvacho chaunoparadza, iva nechokwadi chokuti chinotaridzika chakavimbika. Semuenzaniso, mutengo kubva pasi $ 200 kusvika ku $ 170 inoratidzika seyakasikwa, asi mutengo kubva pasi $ 200 kusvika kune $ 55 unonzwika kusingatauriki. Mari yako yekutengeserana haifaniri kudana kukosha kwekuita mubvunzo kana kuisa mararamiro ako.
Kuti uwedzere maikirwo ako kuwedzerwa uye kuwana mamwe maitiro akanaka, unogona kuisa mutengo wakaderera kupfuura wevhareji. Nokugadzira kutengesa kumaodzanyemba, iwe unosimudza mikana yako yekukunda Amazon Bhokisi Bhokisi uye uve mutengesi wekutengesa muNiche yako.
Zvakare, zvinonzwisisika kufunga nezvekugadzira zvinyorwa zvepaipikisi zvakarongwa pachena kuti upe vatengi vako nguva dzose zvinyorwa zvishoma (f.e kubva kubva ku5% kusvika ku20% inotora). Iwe unogona kupa mubairo vatengi vako kutenga zvinhu zvakawanda, zvichipa kukanganisa pamutengo wechipiri.
Unhu hwemifananidzo yako yezvigadzirwa hunobatsira zvikuru kune vatengi kutenga chisarudzo. Vanoita kuti vashandise pane zvawakanyora pane vamwe. Amazon ine zvido zvayo zvehuhu uye hukuru hwemifananidzo. Unogona kuzviwana pa Amazon kubatsira tsamba neiyi link .
Kubva parutivi rwangu, ndinoda kuwedzera kuti Amazon shoppers haatengi zvigadzirwa zvako, vanotenga zvavanoitira..Kana iwe uine nzira yakanakisisa yekuona maAmerica mazano ekugadzirisa nemifananidzo, unogona kuratidza kushandiswa kwakasiyana-siyana kwezvinhu zvako kuratidza kukosha kwavo. Uyezve, kubhadhara zvakanyanya kunaka kwavo uye zvakasiyana. Zviri nani kukodha muongorori wemufananidzo kuti awane mifananidzo yezvinhu zvako.
Kana mukana wako wekutengi achifarira zvaunotengesa, chinhu chechipiri cherechedza mushure mokunge musoro wacho uine mavara. Vashandi vanoda zvimwe zvinogutsa uye zvinyorwa, ndicho chikonzero ivo vanotarisa kuburikidza nehuwandu hwenyu. Iwe unofanirwa kuvapa nezvose zvakagadzirwa nemhizha mune fomu yakanyatsonaka. Uyezve, inzvimbo yakarurama uko iwe unogona kushandisa nheyo yako yekutsvaga mazwi. Zvisinei, usapfutidza mabhomba ako anewo mazwi makuru akawanda sezvaanoita seasina kusimba uye anogona kusimudzira Amazon kushungurudza. Ita shanyo pamusoro pezvikwata zvitatu zvekutanga sezvo zvichionekwa sezvo zvinonyatsooneka, kunyanya kubva kune zvigadzirwa zvemagetsi. Usangotarisa zvichemo zvechimwe chinhu chaunotengesa asi shandisa mutsara wezvakakosha.
Saka, kana kukosha kwezvakanakira zviwanikwa zvechigadzirwa chako kupfuura vanotsvaga vanokoshesa mari yavo, vanotenga.
Ndinofunga kuti ndima iyi inofanira kuendeswa kune mazwi makuru ekutsvakurudza uye kushandiswa. Ndinokumbira kuti uone kuti iwe unotsvaga kutsvaga mazwi kuiswa sepiramidi. Pamusoro wepamusoro-soro unofanira kuiswa pamberi pako kutsvaga mazwi uye zvinonzwisisika kuzviisa mumusoro. Zvadaro, mazwi ehurukuro dzako uye zvitsanangudzo. Aya mazwi anowanzonyoreswa ndiyo chikonzero nei vachifanira kuva vakakodzera uye kwete kunyanya kukwikwidzana. Panzvimbo yakaderera, tinogona kuona mamwe mazwi ekutsvaga. Icho chakasiyana zvakasiyana.
Kugadzira zita rako, mabhota, tsanangudzo, uye mapikicha zvichapa 80% yemigumisiro yako. Ndicho chikonzero iwe tsvakurudzo yako yakanakisisa inofanira kuiswa pano. Uye kana uine mamwe mabhesi asina kumboshandiswa, usaparadza uye usanganisa mumamwe masangano.